Somalia:Diyaarado la sheegay inay Duqeeyeen Kismaayo | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > TFG Somalia, WARARKA	> Somalia:Diyaarado la sheegay inay Duqeeyeen Kismaayo
Wararka laga helayo Kismaayo iyo Koonfurta Soomaaliya ee ay helayaan warbaahin kala duwan ayaa kusoo waramaya in galabta diyaarado duqayn ugeysteen Magaala Madaxda Gobolka J/Hoose ee Kismaayo,magaaladaas oo ay gacanta ku hayaan xarakada Al shabaab.
BBCda ayaa sheegtay in diyaarado garaaceen meelo udhaw magaalada Kismaayo oo la sheegay in xarakada Alshabaab saldhigyo ku leeyihiin.
sida ay sheegtay idaacadda BBC du waraysi ay Laanta af soomaaliga la yeelatay Madaxa Jubooyinka Sh.Abuukar,ayaa shiikhu ku sheegay in diyaaraduhu ahaayeen miig ah oo ay leeyihiin Kiinya,horeyna ay deegaano ugaraaceen waxna kulaayeen.
Waxaa kale uu sheegay inaysan cidina wax ku noqon weerarka maanta,waxa kale uubeeniyay in loo jiro Afmadaw 8 km,isagoo ka jawaabaya su’aal uu wariyuhu weydiiyay oo ku saabsanaa hadal ah in saraakiisha Ciidamadu sheegeen in magaalada Afmadaw loojiro 8 KM.
Gobolada Jubooyinka ayaa maalmahan waxaa kasocday dagaalo ay ciidamada Kiinya iyo ciidamo Soomaali ah ay kusooqaadeen deegaanada ay gacanta ku hayaan al shabaab,iyadoo dagaalada la isugu bahaystay in deegaanadaa looga saaro.
Warbaahinta ama idaacadaha qaarkood oo soo xiganaya dad kusugan deegaanada ayaa sheegay inay maqleen dhawaqa diyaaradaha iyo laba qarax oo waaweyn.
Diyaaradahan ayaa la sheegay inay garaaceen meel aan Dekedda Kismaayo waxba ka fogeyn,oo ujirta ilaa hal KM.
Lama sheegin ilaa hadda qasaare nafeed oo ay geysteen diyaaradahaas.
Warka kusaabdan dagaalka jubooyinka iyo soogalitaanka Ciidamada Kenya ayaa Waxaa si aad ah wax uga qora warbaahintu dalka Kenya ka akhri xagga hoose.
Libya:New Libyan authorities to observe all international agreements Libya:Gaddafi has left a will + Related News